Booliska oo Baaraya Hanjabaado Dil ah oo Loo Jeediyay Xoghayaha Ururka Macalimiinta – The Voice of Northeastern Kenya
Booliska oo Baaraya Hanjabaado Dil ah oo Loo Jeediyay Xoghayaha Ururka Macalimiinta
Waxda dambi baarista ee ciidamada booliska dalka ayaa bilowday baaritaanno ay ku sameyneyso hanjabaado dil ah oo loo jeediyay xog hayaha guud ee ururka macalimiinta dlaka Wilson Sossion.
Mr Sossion ayaa lagu wadaa in uu xarunta dhexe ee laanta CID-da ka qoro war bixin macluumaad ah oo ku saabsan handadaadaha lasoo gaarsiiyay.
Xog hayaha ururka ay ku bahoobeen macalimiinta qaranka ee KNUT ayaa booliska u sharixi doona fariin qoraaleed taleefankiisa loogu soo diray oo loogu sheegay in uu qoyskiisa tuso meesha ay ku aasi lahaayeen, maadaama uusan sii noolaan doonin.
Qareenka Wilson Sossion oo lagu magacaabo Paul Muite ayaa xaqiijiyay in uu dioyaariyay warqad cabasho ah oo rasmi ah, taasoo booliska ku socota isla markaana lagu muujiyay in ay khatar ku jirto nafta xog hayaha macalimiinta.
Ilaa iyo hadda lama oga cida fariimaha hanjabaadda ah u dirtay sarkaalka ka tirsan masuuliyiinta macalimiinta dalka, hase ahaatee laanta dambi baarista ee fadhigeedu yahay wadada Kiambu Road ee magaalada tan Nairobi ayaa maanta guda gashay baaritaannada ku saabsan arrintaan.
Madaxda ururka macalimiinta KNUT oo uu hor kacayo Mr Sossion ayaa inta badan u dooda xuquuqda macalimiinta, iyagoo doonaya in mushaar kordhin loo sameeyo bareyaasha Schoollada ay maamusho dowladda.
← Xildhibaankii hore ee Nakuru oo geeriyooday
Booliska Zimbabwe oo xirxiray dad kasoo hor jeeda madaxweynaha dalkaas →